Orinasa famokarana silikola amina silina China | SJJ
Efa mba nanana sary ve ianao mba hisotro kaopy madio sy mahasalama hisotroana mora rehefa mitsangatsangana, mitoby, amin'ny dia raharaham-barotra, mitsangatsangana any ivelany miaraka amin'ny fianakavianao na ny namanao? Ankehitriny ny amboara sy tavoahangy Silika mivalona sy azo entina dia manatanteraka izany. Ny kaopy sy tavoahangy vita amin'ny silika dia vita amin'ny sma ...
Efa mba nanana sary ve ianao mba hisotro kaopy madio sy mahasalama hisotroana mora rehefa mitsangatsangana, mitoby, amin'ny dia raharaham-barotra, mitsangatsangana any ivelany miaraka amin'ny fianakavianao na ny namanao? Ankehitriny ny amboara sy tavoahangy Silika mivalona sy azo entina dia manatanteraka izany. Ny kaopy sy tavoahangy vita amin'ny silika dia vita amin'ny habe kely miaraka amin'ny karazan-tsampona rehetra toy ny tady, fehy, peratra fanalahidy, rojo lakile, farango ary ny hafa, mety kokoa ny mametraka ao anaty kitapo na paosinao koa. Azo antoka ny fitaovana silika vita amin'ny sakafo, ny kaopy sy tavoahangy vita amin'ny silipo dia aforitra ary atao ao anaty kitapo na paosinao hitazomana ny lafiny anatiny ho madio sy mahasalama. Ny endriny dia mety ho endrika sy habe isan-karazany, logo sy loko isan-karazany no mahatonga ny kaopy sy tavoahangy silipo ho mahafinaritra, manintona ary manintona. Mora sy mahatalanjona tokoa ny mampiasa ny kaopy sy tavoahangy silikola, na inona na inona any ivelany na any anaty. Ny kaopy sy tavoahangy silika dia fitaovana amin'ny fiainanao andavanandro ary koa ireo entana tena tsara ho an'ny fampiroboroboana, orinasa, fanomezana, fahatsiarovana sns.
Fitaovana: Fitaovana Silika ampiasaina amin'ny sakafo (tsy misy BRA sy Phthalate)
Volavola sy habe: 2D na 3D, Maimaim-poana ny bobongolo ho an'ny volavola efa misy,
namboarina namboarina no raisina.
Loko: afaka mifanitsy amin'ny loko PMS, na miankina amin'ny zavatra takinao.
Logos: Ny logo dia azo soratana, alefa na alefa miaraka na tsy misy loko
Fametahana: kofehy, kofehy, peratra fanalahidy, rojo lakile, farango na fanarahana ny an'ny mpanjifa
Fonosana: kitapo pc / poly 1, na araho ny torolalana omenao
MOQ: 200 pcs na iharan'ny fametahana
Teo aloha: Tady Silicone
Manaraka: Fitaovana an-dakozia vita amin'ny silikola
Lany mpihazona tavoahangin-drano